musha 9 Products 9 ReportCard
Gadzirisa nyaya dzekuita pane sosi nekutarisa uye kunyora yako Cognos chiitiko nekuita.
Dhawunirodha iyo datasheet
ReportCard zvinoramba zvichiongorora & zvinorekodha yako yeCognos nharaunda chiitiko uye mashandiro. Ichaisa zvikumbaridzo kuti ikuzivise nezve zvingangoitika nyaya. Izvi zvinoita kuti boka rako rishande, richivabvumidza kuti vapindure uye vagadzirise nyaya dzekuita.
Dzivisa kubuda uye nyaya nekugara wakanyeverwa
ReportCard monitors uye anorekodha chiitiko mukati memako eCognos nharaunda nezvivakwa kuitira kuti ugone kukurumidza kuona nyaya dzekuita uye nekukurumidza kudzivirira matambudziko anotevera asati aitika.
Yechokwadi-nguva yambiro inokuzivisa iwe kana mamiriro ezvinhu asina kunaka achiitika, zvichikubvumidza kuti usarudze chikonzero chekukanganisa. Izvi zvinokushongedzera nedata rinodiwa kuti ubatanidze zviwanikwa zvakakodzera kuti uwane kugadzirisa nekukurumidza.
Kudzokorora kwekukurumidza kunosimbisa kuti matanho ese akatorwa (zvechokwadi anoguma) akatungamira mukuvandudzwa kwekuita.
Nzwisisa maitiro ako eCognos
Gadzira mashandiro ekuita. Enzanisa kumberi uye mushure mekuchinja kwese kunoitwa kuCognos nharaunda yako kuti uongorore zviwanikwa kana kurasikirwa. ReportCard'' Kutakura uye kushushikana kwekuyedzwa kunofanidza akasiyana maitiro ekuita, zvichikubatsira kuti unzwisise izvo izvo nzvimbo yako yeCognos inogona uye isingakwanise kubata. Uku kugona kunopa iwe kufanoona kudzivirira zvimhingamupinyi zvekuita mune ramangwana.
Ziva uye Goverana Zvakanakisa Maitiro
ReportCard inokutendera kuti uone kusakosha mukugadzirwa kwemushumo uye kuona kuti dhizaini dhizaini yasangana. Izvi zvinonyanya kubatsira mumasangano ane wega-anozvishandira BI, uko mushandisi mumwechete wesimba anogona kugadzira gumi nemimwe mishumo inopararira kwakawanda.
Dhawunirodha iyo Dhatasheet